Shoes & Bags | Page3| Home
Home› Shoes & Bags
နူးညံ့တဲ့အထိအတွေ့နဲ့ အလှပဆုံး ဆွဲငင် အားတစ်ခုရဲ့ ခေါ်ဆောင်ရာအောက်မှာ…
ပန်းနုရောင်ခြယ်နေ့လေးတစ်နေ့အတွက် ချစ်စရာအ ကောင်းဆုံး ကောင်မလေး…
Winter & Sports Style
လတ်ဆတ်တဲ့ ဆောင်းနဲ့အတူ တက်ကြွလန်းဆန်းနေတဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ စိတ်ကိုဘယ်လိုစတိုလ်မျိုးလေးတွေက လွှမ်းမိုးထားခဲ့သလဲဆိုတော့….
လန်းဆန်းတဲ့ဖက်ရှင်၊ ခေတ်မီတဲ့သွင်ပြင်၊ သစ်လွင်တဲ့ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ ခံစားမှုအသစ်တွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ဖို့ ခေတ်မီသစ်လွင်တဲ့ ဖက်ရှင်ချစ်သူများအ တွက် အဆုံးအစမရှိ ခြေဆန့်နိုင်မယ့် အလှတရား တို့က ခေါ်ဆောင်သွားဖို့ အသင့်ပါ...
Available at : Charles & Keith ကောင် တာတိုင်းတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Model - Lain Maw Thee (Junon)
Shoes & Bags - Charles & Keith
တစ်နေ့တစ်မျုိုး မရိုးနိုင်တဲ့ ဖက်ရှင်ကမ္ဘာထဲက အသစ်အသစ်သော ဖက်ရှင်တွေနဲ့အတူ လက်ကိုင်အိတ်ဒီဇိုင်းဆန်းများက သင့်ရဲ့ဖက်ရှင်ဒီဂရီအမြင့်ဆုံးကို ရောက်ရှိနိုင်ဖို့အတွက် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ခပ်ရဲရဲသာ စိန်ခေါ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဖက်ရှင်ရေစီးနဲ့အတူ ဖက်ရှင်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများရဲ့ အသွင်ဆန်း ပြားမှုကလည်း ထပ်ကြပ်မကွာ လိုက်ပါလာပါပြီ။ ခေတ်ရှေ့ပြေးနေတဲ့ ခေတ်သစ်မဒီလေးများအ တွက်
အမျိုးသမီးတိုင်းရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှု ခေါင်းစဉ်တွေထဲက မပါမဖြစ်စိတ်ဝင်စားမယ့် ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့.....
လူအများကြား ထင်းကနဲဝင့်ကြွားစေမယ့် အများနဲ့မတူ တမူထူးခြားတဲ့ စွဲမက်ဖွယ်အလှတရားများနဲ့.....
ခေတ်မီလှပနေတဲ့ မိန်းမပျိုတစ်ယောက်ရဲ့ ခမ်းနားထည်ဝါပြီး စမတ်ဖြစ်နေစေဖို့ ခမ်းခမ်းနားနား လှပတဲ့အသွင် ဆောင်စေမယ့် လည်သာအိတ်များနဲ့ လူအများကြား ဆန်းပြားနေစေဖို့ ပုံဖော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ……
ဆွဲငင်အားကြီးမားလှတဲ့ ဖက်ရှင်ကမ္ဘာထဲကို အလိုလိုရောက်ရှိသွားသလို.....
စတိုင်လ်ကျတဲ့ မိန်းမပျိုတစ်ယောက်...သူမနဲ့အတူ သွားလေရာမှာ လိုက်ပါတတ်တဲ့ ဖက်ရှင်အတွဲအစပ်...ဒီအတွဲအစပ်တွေ ကြားက မရှိမဖြစ် ပါနေတတ်တဲ့ လက်ကိုင်အိတ်..